Soo iibso PF 750 (959151-50-9) bixiyeyaasha hplc x98% | Lacagta Fatahaada AASraw
/ Products / Xabbad dufan leh / PF 750
Rating: Category: Xabbad dufan leh Tags: iibso PF 750, PF 750, PF 750 iibka, Shirkadaha PF 750
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee PF 750 (959151-50-9), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
PF 750 waa xoog xoog leh, waqti-ku-tiirsan, aan lafdhabar lahayn ee hidde-gureen amase hiddo-gale (FAAH) inhibitor (IC50 = 16.2 nM) oo aan soo bandhigin wax firfircooni ah oo ku saabsan noocyo kale oo hidrog ah. Waxay doorbideysaa in la joojiyo nidaamka Nidaamka Dhibaatada ee FAAH. iyada oo qiimayaasha IC50 qiimaha 0.6 iyo 0.016 μM marka ay horay u sii maraan FAAH-ga dadka dib u habaynaya ee daqiiqadaha 5 iyo 60, siday u kala horreeyaan. Xakamaynta ambalaanska ee fatty acid (FAAH) waa enzymed ka masuul ah hiddo-gelinta iyo ficil-celinta
Fiidiyaha PF 750
I.PF 750 Calaamadaha aasaasiga ah:
Name: PF 750
Nooca Molecular: C21H32O
Miisaankani waa: 300.48
Dhibcaha Biyaha: 79.5-80 °
II. Isticmaalka PF 750 ee wareegga:
2.How waa shaqada loogu talagalay PF 750?
PF-750 waxaa la siiyaa sida budada adag ee loo yaqaan "crystalline solid". Xalalka saamiga ah waxaa laga yaabaa in la sameeyo iyada oo la burburinayo PF-750 oo ku jirta dareeraha dabaysha leh ee la googooyey gaasta gudaha ah. PF-750 waxaa lagu xalin karaa dareeraha dabiiciga ah sida ethanol, DMSO, iyo dimethyl formamide (DMF). Xakamaynta PF-750 ee ethanol waa qiyaastii 1 mg / ml iyo qiyaastii 20 mg / ml DMSO iyo DMF. PF-750 si aad ah loola heshiiyo bakhaarada aqueous. Qiyaasta ugu sarreeya ee qashinka aqueous, PF-750 waa in marka hore lagu kala diro DMSO kadibna lagu qasiqiyay doorasho aqueous of choice. PF-750 wuxuu leeyahay xajmiga xNUMX mg / ml ee 0.125: 1 ee DMSO: PBS (pH 5) adoo isticmaalaya habkan. Kuma talineyno inaan kaydino xalalka aqueous in ka badan hal maalin.
Si aad u sii deysato, tubada kuleylka 37 ° C oo ku rux biyaha qubeyska ultrasonic. Warshadaha kala duwan waxay leeyihiin dufano kala duwan oo ah badeecada wax soo saarka, oo kaliya tixraaca. Haddii diirada loo baahan yahay tijaabadu aad u weyn tahay xaddiga xaddiga ah ee sheyga, ku darso isku-dhafan si ay u caawiso kala-dirista ama u-habeynta diiradaada.
4. Talooyin dheeraad ah:
6. PF 750 Cunnada:
7. Suuqa PF 750:
IV. Sida loo iibsado PF 750 ka soo AASraw?
Tijaabi bartaada sheyga ee aad jeceshahay:
Sida loo isticmaalo Clinbuterol miisaanka lumitaanka Waa maxay budada nandrolone loo isticmaalo faa'iidooyinka / nandrolone?
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan alaabooyinka la xiriirasoo dhawow inaad gujiso halkan.
Noqo kuwa ugu horreeya ee dib u eega "PF 750" Cancel reply
Nootropics budada (17)
Anterolics steroids (48)
Nandrolone budada budada (10)
Taxanaha budada ah ee testosterone (14)
Gowrado Dumar ah (22)
Taxanaha Estradiol (8)
Galmada Horumarinta Deedaha (15)
Isticmaal lab ah (6)
Xabbad dufan leh (33)
Dawooyinka PCT (9)
Beerta dhirta (1)
Qaar kale waxay (11)
09 / 12 / 2018 Dr. Patrick Young31
Ka iibso maadada Clenbuterol Raw-booga internetka si badbaado leh
09 / 13 / 2018 Dr. Patrick Young1